Kooxda Juventus oo dhammaadka xilli ciyaareedkan doonaysa inay beeca xorta ah ku qaadato laacib ka tirsan Man United – Gool FM
(Turin) 15 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay rajaynayso inay la saxiixato laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Nemanja Matic weliba ay ku soo qaataan beeca xorta ah dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga xulka qaranka Serbia ayaa ku guuldarreystay inuu boos joogto ah ka helo garoonka Old Traffrod kal ciyaareedkan, waxaana la rumeysan yahay inay dalabyo ka soo gudbiyeen isbuucyadii dhowaa kooxaha Talyaaniga ka dhisan ee Inter Milan iyo AC Milan.
Matic ayaa heshiiskiisa haatan ee garoonka Old Trafford waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Red Devils ayaa weli qiyaar u haysata inay heshiiskiisa ballaariso oo ay ku darto sanad kale.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska The Sun ayaa sheegeysa in Juventus oo beeca xorta ah kula soo saxiixatay labada xiddig ee Aaron Ramsey iyo Adrien Rabiot suuqii xagaaga uu hadafkoodu yahay inay hubiyaan saxiixa xiddigii hore ee naadiga Benfica kaddib markii ay waayeen Paul Pogba.
Matic, kaasoo kulankiisii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan ku soo bilowday kulankii kooxdiisa ay shalay guusha ka gaartay Leicester City ayaa 89 kulan u ciyaaray Man United tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Chelsea sanadkii 2017-kii.